Kuzvipira 5 system: Vhurike uye yakatendeseka bhizinesi kuzvipira 1.Our yedu inosimbisa kuvaka kuvakwa kwechikwereti kumira uye kuzvidzora, inonyatsoteerera nemutemo pamusoro pekuchengetedza kodzero yevatengi uye zvavanofarira, inoita nemoyo wose zvisungo zvevashandi vebhizinesi, .. .
Kuala Lumpur, Kubvumbi 6 (AFP) - kubva musi wa12 PM nhasi, mabhuku anoverengeka echiMalaysia akange asimbisa nyaya gumi nematanhatu uye makumi matanhatu nemaviri akafa, zvichiunza huwandu hwenyaya dzakasimbiswa kune 3,793. Nhasi, vanhu makumi maviri nenhanhatu vakadzingwa muchipatara, vachiunza huwandu hwenyaya dzakawanikwa kune 1,241. Mukuwedzera, a ...
Imwe pfungwa yekudzivirira uye kudzora denda-HEBEIPUKANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. yakapa zvinhu uye zvekushandisa kurwisa iyo COVID-19
Mwaka Idzva inotanga muna 2020, Iko kupararira nekusimudzira kweCOVID-19 kunokanganisa hupenyu hwakajairwa nemhuri zhinji.Vashandi veMedical muWuHan nedzimwe nzvimbo munyika yese vari kushanda kumberi kwekudzivirira kwekudzivirira uye kutonga.In kuitira kuchengetedza zviri nani hutano hwevanhu, iyo XuShui ...